ट्याग: हीटम्यापि | | Martech Zone
हटजर: हीटम्याप्स, फनेलहरू, रेकर्डि ,हरू, एनालिटिक्स र प्रतिक्रिया
शनिबार, फेब्रुअरी ०१, २०२० शनिबार, जुलाई २१, २०१। Douglas Karr
हटजरले मापन, रेकर्डिंग, अनुगमन र एक सस्तो प्याकेजमा तपाइँको वेबसाइट मार्फत प्रतिक्रिया संकलनको लागि उपकरणहरूको पूर्ण सेट प्रदान गर्दछ। अन्य समाधानहरू भन्दा एकदमै भिन्न होटजारले सरल किफायती योजनाहरूको साथ योजनाहरू प्रदान गर्दछ जहाँ संगठनहरूले असीमित वेबसाइटहरूको अन्तर्दृष्टि सिर्जना गर्न सक्दछन् - र उनीहरूलाई असीमित संख्यामा प्रयोगकर्ताहरूको लागि उपलब्ध गराउँदछ। हटजर एनालिटिक्स टेस्टले हीटम्यापहरू समावेश गर्दछ - तपाईंको प्रयोगकर्ताहरूको क्लिकहरू, ट्यापहरू र स्क्रोलि behavior व्यवहारको दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान गर्न। आगन्तुक रेकर्डि .हरू
मंगलवार, मे 15, 2012 शनिबार, जुलाई २१, २०१। Douglas Karr
आईक्व्यान्ट एक भविष्यवाणी गर्ने ट्रयाकि eye मोडेल हो जुन प्रयोगकर्ताहरूले पृष्ठ on देखि seconds सेकेन्ड भित्र के हेर्दछन् भन्नेमा विशेष रूपमा देखिन्छ। यो विचार सरल छ: seconds सेकेन्ड भित्र प्रयोगकर्ताले तपाईं को हो, तपाईंको मूल्य प्रस्ताव के हो, र अब के गर्ने भनेर हेर्न सक्षम हुनुपर्छ। EyeQuant पृष्ठ को डिजाईन अनुकूलन को लागी सुनिश्चित गर्न को लागी सुनिश्चित गरीन्छ। यहाँ हाम्रो आईकिय्यान्ट डेमोको नि: शुल्क परिणामहरू छन् ... म एकदम खुसी छु
के सदस्यता ड्रपडाउनले काम गर्दछ?
मंगलवार, सेप्टेम्बर 13, 2011 शनिबार, जुलाई २१, २०१। Douglas Karr
जब हामीले हाम्रो न्यूजलेटर पुन: सुरू गर्‍यौं, म सदस्यता लिंकलाई हाम्रो साइटमा एक प्रभावशाली सुविधा बनाउन चाहन्छु। हामीले साइटको शीर्षमा ड्रप-डाउन सेक्सन थपेका छौं र यो अविश्वसनीय भएको छ। जबकि हामी पहिले एक वा दुई ग्राहकहरूको ट्रिकल प्राप्त गर्न सक्दछौं, अब हामी प्रत्येक हप्तामा दर्जनौं ग्राहकहरू पाउँछौं। मार्केटिंग टेक्नोलोजी न्यूजलेटर लगभग popular,००० ग्राहकहरुका साथ धेरै लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ! म केहि थप ड्रपडाउन थप्न चाहान्छु
बिहीबार, फेब्रुअरी 14, 2008 Douglas Karr
भर्खर Yooba.com मा एक कम्युनिकेटर (महान शीर्षक) बाट एक नोट प्राप्त भयो, जुन यस वेब वसन्त सुरू गर्न तयारी गर्दै। भिडियो थोरै गुप्त छ तर साइटमा सामग्री आकर्षक छ: Yooba मार्केटिंग पेशेवरहरु को लागी एक वेब आधारित B2B सेवा हो। हाम्रो उद्देश्य यो तपाइँको सृजनात्मकता र उपलब्धिहरु मा ध्यान केन्द्रित गर्न को लागी सम्भव बनाउनु हो। Yooba ले तपाईंलाई तपाईंको डिजिटल मार्केटिंग अनुभवको लागि एक समावेशी प्लेटफर्म दिन्छ। हामी होस्टिंग र डाटाबेस प्रदान गर्दछौं